Filtrer les éléments par date : samedi, 12 octobre 2019
samedi, 12 octobre 2019 19:25
Ambatofitorahana – Ambositra: Basy vita gasy roa saron’ny Zandary
Nahazo fanomezam-baovao avy amin’ny tsara sitrapo ny Zandary fa misy olona mitazona basy mampiahiahy ao Miadrifaikona, Kaominina Ambatofitorahana, Distrika Ambositra. Nidina tao an-toerana avy hatrany ny Zandary avy amin’ny kaompania Ambositra.
Vao nahatazana ireo Zandary ilay olona voatondro fa mitazona basy dia nitsoaka any anaty ala. Nanao fisavana ny tranony ny Zandary ka tamin’izay no nahitana basy roa vita gasy. Nogiazana avy hatrany ireo fitaovam-piadiana ireo. Nanokatra fanadihadiana ny Zandary, mitohy ihany koa ny fikarohana ilay tompon’ny basy.
samedi, 12 octobre 2019 19:23
Toamasina: Nirehitra ny ampahan’ny tsena tao Bazary Be
Tsy fantatra mazava ny antony nitarika ny haintrano tao bazary be ny tolakandron’ity sabotsy 12 oktobra 2019 ity. Efa nikatona ny bazary, hoy ireo mpivarotra, no niseho ny firehetana. Niainga tao amina « épicerie » iray ny afo.
Tonga mialoha ny mpamonjy voina an’ny seranan-tsambon'i Toamasina namono ny afo, nanampy avy ato afara ny mpamonjy voina an’ny Kaominina Toamasina. Nalaky voafehy ny afo.
Nisy ilay filazana hoe raha tena mpanao politika sy "Candidat sérieux", dia tokony manana délégué isaky ny biraom-pifidianana manara-maso ny vatony.
Tsotra no avaly an'izay, raha ny tokony ho izy dia anjaran'ny fanjakana no miantoka sy mikarakara fifidianana hametrahana ireo tompon'andraikitra isan-tokony, voalazan'ny Lalampanorenana, azy no miantoka ny fahadiovan'ny latsa-bato, azy no miantoka ny kojakoja rehetra ilaina amin'izany, eny hatramin'ny bileta dia anjaran'ny fanjakana no miantoka an'izay.
Ka tsy izay moa no nambaran'ny didin'ny HCC, hoe andraikitry ny fanjakana feno no miantoka ny fiainam-pirenena, ary tsy tokony atao sakana ho an'ireo kandida hirotsaka ny resa-bola? Nefa toa natao letrezana ka ny kandida indray no miantoka ny bileta sy ny caution izay mandeha hatrany amin'ny 50 tapitrisa ariary (250 000 000 fmg) raha hilatsaka ho Filoham-pirenena.
samedi, 12 octobre 2019 09:07
« Jeux de Melaky »: Misokatra eto Morafenobe ny andiany faha-31
Ambohimpihaonana ny eto Morafenobe. Misokatra ofisialy ny 11 oktobra 2019 ny Lalaon’i Melaky (Jeux de Melaky). Andiany faha-31 ny amin’ity taona ity, nampitondraina ny lohateny hoe « Manaitsy ». Misy ny fifaninanana ara-panatanjahantena ifaninanan’ireo tanora avy amin’ireo Distrika mandrafitra ny Farita Melaky, eo ihany koa ny zavakanto mampiavaka ny faritra.
samedi, 12 octobre 2019 08:39
Fifidianana kaominaly: Nanomboka atsy Afrika Atsimo ny fanontàna ireo taratasim-pifidianana
Atonta atsy Afrika Atsimo nanomboka tamin'ity herinandro ity ireo taratasy fitànana an-tsoratra sy valopy hasiana ireo voka-pifidianana ho an'ny fifidianana Ben'ny Tanàna sy Mpanolotsain'ny Tanàna, izay hotanterahina ny alarobia 27 novambra 2019. Ny tetikasa SACEM (Soutien au Cycle Electoral de Madagascar) no mandray an-tànana ny fanontàna azy ireo.
Eto Madagasikara, ao amin’ny Trano printim-pirenena, ary efa manomboka ihany koa ny fanontana ireo biletà tokana, miisa 21 tapitrisa.
Kaominina miisa 45 amin’ireo 1695 manerana ny Nosy no ahitana kandida tokana amin’ny fifidianana Ben'ny tanàna. Kaominina miisa 148 kosa no ahitana kandida tokana amin’ny fifidianana mpanolotsaina hotanterahina ny 27 novambra io.
samedi, 12 octobre 2019 08:33
Fianarantsoa: Diabe am-pahanginana
Niray hina sy niray fo i Fianarantsoa omaly zoma 11 oktobra nandritra ny Diabe am-pahanginana nanomezam-boninahitra sy ho fahatsiarovana ireo namoy ny ainy tamin’ny lozam-pifamoivoizana izay nahafatesana olona telo teo Talatamaty, sy nahafatesan’ny vehivavy iray mpangataka teo Ambalapaiso Ambony, ary ho firaisam-po amin’ny fianakaviana.
Maro no nandray anjara, nahitana olom-boafidy, solontenam-panjakana avy any amin’ny sampandraharaha miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana, mpiara-monina, mpanao gazety, tanora … niaraka niombom-po tamin’ireo fianakavian’ny maty.
Niainga teny Talatamaty ny diabe ary nihazo an'Ambalapaiso Ambony.
samedi, 12 octobre 2019 08:31
12 octobre: Journée internationale de solidarité avec les peuples amérindiens
12 octobre: Journée internationale de solidarité avec les peuples amérindiens.
samedi, 12 octobre 2019 08:29
12 octobre: Journée mondiale des soins palliatifs
12 octobre: Journée mondiale des soins palliatifs.
samedi, 12 octobre 2019 08:28
12 octobre: Journée mondiale de l'arthrite
12 octobre: Journée mondiale de l'arthrite.